Misy fiovana mitranga eo amin'ny fivarotana antsinjarany sy an-tserasera, saingy tsy azoko antoka fa misy olona mahatakatra tsara izay halehantsika. Ny fifaninanana mahery vaika sy ny tolotra fandefasana maimaim-poana dia tsara ho an'ny mpanjifa fa mampandeha orinasa amin'ny orinasa ecommerce izy ireo. Mandritra izany fotoana izany dia mbola tia ny mpiantsena showrooming ary mahazo mikasika sy mahatsapa ireo vokatra tadiavin'izy ireo hovidiana.
Ny fivarotana antsinjarany dia mety ho azo antoka kokoa noho ny tsapan'ny ankamaroan'ny olona, ​​manome efitrano fampirantiana sy toerana itazonana an'ireo mpiantsena maniry azy izao. Na izany aza, tsy misy isalasalana fa ny varotra an-tserasera dia manova ny fomba fanaovana asa. Ireo mpivarotra antsinjarany dia tsy maintsy manana fisian-tserasera mahavariana ahafahan'izy ireo manitatra ny tratrany hanoloana ny fifamoivoizana tsy azon'izy ireo miditra amin'ny magazay.